people Nepal » कपिलको शोमा फर्कने भए डा. गुलाटी कपिलको शोमा फर्कने भए डा. गुलाटी – people Nepal
कपिलको शोमा फर्कने भए डा. गुलाटी
कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोभरबीचको झगडाको प्रत्यक्ष असर सोनी च्यानलको ‘टीआरपी’मा परिरहेको देखिन्छ । सुनिलले शो छोडपछि कपिलले ‘द कपिल शर्मा शो’को तीन श्रृंखला प्रसारण गरेका थिए । यी श्रृंखलामा दर्शकहरु रुष्ट देखिए र च्यानलको टीआरपीमा नराम्रो प्रभाव पर्यो ।
तर, अब सुनिलका फ्यानका लागि खुशीको खबर आएको छ । आगामी दुई श्रृंखलापछि सुनिल ग्रोभर शोमा फर्कन सक्ने सोनी च्यानल बताएको छ । हिजोआज, सुनिल बिदा मनाइरहेका छन् । झगडा हुन अघिबाटै सुनिलले आफ्नो व्यक्तिगत शोका लागि बिदा मागेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, सुनिलबिनै ४ वटा श्रृंखला सुट गरिने तय भइसकेको थियो । सुनिल बिदाका दिनहरुमा आफ्नो व्यक्तिगत शोहरुमा व्यस्त रहे । खबरलाई मान्ने हो भने, ७,८,११ र १२ एप्रिललाई शोको सुटिङ मिति तय गरिएको छ । यता कपिल पनि आफ्नो फिल्म ‘फिरंगी’मा व्यस्त थिए ।
यसै महिनाको अन्त्यबाट सुनिल पनि शोमा फर्कने छन् । तर, सुनलको पुनःआगमनका लागि सोनी च्यानलले केही महंगो मुल्य चुकाउँने बताइएको छ अर्थात् सुनिल आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर मात्रै कपिलको शोमा फर्कने छन् ।